Iiyunithi Ukuthengisa kunye nokuhlawulwa eUnited States
Iyunithi ngumlinganiselo wezindlu ezilingana neendawo zokuhlala zekhaya elinye. Kwintetho eqhelekileyo e-Australia nase-New Zealand, igama elithi "iyunithi", xa libhekisa kwizindlu, lihlala lithetha indawo yokuhlala, apho iqela lezindlu lifakwe kwisakhiwo esinye okanye ngaphezulu esinezixhobo ezininzi ('isakhiwo sebhloko'), okanye indawo yokuhlala okanye iyunithi yasekhaya, apho iqela lezindlu likwisakhiwo esinye okanye ngaphezulu kwisitayile esinye, esihlala sihleliwe sijikeleza indlela. Emva koko, iyunithi yendawo enamagumbi agcweleyo, ehlala isezingeni eliphantsi, elinokuqhotyoshelwa, lihlawulwe okanye litshitshisiwe, kwiqela leendawo zokuhlala ezifanayo. Isetyenziswe kumzi-mveliso wophuhliso lwedolophu yase-Australia naseNew Zealand, ikwayindawo yokuhlala. Iyunithi yegumbi elinye lihlala libizwa ngokuba yitafile okanye isitayile se studio, eyaziwa ngokuba yiGumbi elinye lokuSebenza okanye i-SRO yaseNyakatho Melika. Kunokuba nzima ukuqonda ngqo ukuba zeziphi iimpawu ezahlula ulwakhiwo oluthile lokuhlala njengeendawo zokuhlala ekubhekiswa kuzo njengeeflethi okanye kumagumbi okuhlala, kodwa ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kubonisa ukuba kukho umda weklasi kwikota. ECanada, i-arhente kazwelonke yezibalo, iStatistics Canada, ibala inani leendawo zokuhlala zabucala kweli lizwe kubalo ngalunye, kwimeko apho baziwa njenge "ndawo yokuhlala" kwaye banokubhekisela ngokulinganayo kwindlu okanye eflethini. Kuyo yonke imihla isiNgesi saseCanada "eyunithi" isetyenziselwa isigama segumbi kunye neekhondomu.